१० बुँदे भनेर ओलीसँग गएका नेताको हरिबिजोग भयो : माधव नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने भन्दै एमालेमै रहेका नेताहरूको हरिबिजोग भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीको सिन्धुपाल्चोक काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले काठमाडौंको चावहिलमा आयोजना गरेको दशैँ तिहार शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले एमालेमै रहेका नेताको ओलीकै कारण हरिविजोग भएको बताएका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आदेश पालना गर्‍यो भने मात्रै स्याबासी पाउने नभए हरिविजोग हुने अवस्था रहेको नेपालले बताए ।
‘ओलीको आदेश पालना गर्‍यो भने मात्रै उसले स्याबासी पाउँछ, ऊ त्यहाँ बस्न पाउँछ । आदेशको पालना गरेन भने ट्याँउ ट्याँउ गरेको भनेर सुन्नुपर्छ । सुन्नुभएको छैन १० बुँदेको ट्याउँ ट्याउँ ?,’ नेपालले भने ।
ओलीको कुनै छलफल नगर्ने, कसैको सम्मान नगर्ने कारणले नै आफूहरूले एमालेबाट विद्रोह गर्नुपरेको उनले बताए ।
ओलीको आदेश पालक मात्रै एमालेमा रहन सक्ने उनले बताए । ‘एमालेमा ओलीको आदेश पालना गर्ने मात्रै टिक्न सक्छन् । उनीहरूले मात्रै स्याबासी र पद पाउँछन् । ओलीको आदेश नमान्दा कति ट्याउँ–ट्याउँ गरेको भनिन्छ,’ नेपालले भने ।
नेपालले एमालेको संस्थापक आफैं भएको बताउँदै त्यतिबेला केपी ओली कहीँ नदेखिएको पनि दाबी गरे ।
‘२०३१ सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्रको दस्तावेज जारी गर्ने बेलामा केपी ओलीहरू कहाँ थिए ? ०३२ सालको जेठ महिनामा कोअर्डिनेसन केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरो घोषणा गर्दा कहाँ थिए ? त्यसबेला मुकुन्द न्यौपाने र झलनाथ खनाल हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो । म यहीँ छु,’ नेपालले भने ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिको कुरा सुनेपछि महासचिवमा विष्...